film festival Ny Maha-Izy Ireo Orinasa - Famolavolana
Ny Maha-Izy Ireo Orinasa
Ny Maha-Izy Ireo Orinasa "Sinema, ahoy" no teny filamatra ho an'ny andiany faharoa amin'ny Fetin'ny Film Eropa any Kioba. Izy io dia ampahany amin'ny foto-kevitra momba ny famolavolana mifantoka amin'ny fitsangatsanganana ho fomba fampifandraisana ireo kolontsaina. Ny volavola dia manafoana ny dia nisy sambo filokana nandeha an-tongotra avy tany Eropa nankany Havana feno sarimihetsika. Ny famoronana ireo fanasana sy tapakila ho an'ny festival dia nentanin'ny aingitra lalana sy pasipaoro ampiasain'ny mpandeha eran'izao tontolo izao ankehitriny. Ny fiheverana ny fandehanana an-tsarimihetsika dia mamporisika ny vahoaka handray sy mazoto amin'ny fifanakalozana ara-kolontsaina.
Anaran'ny tetikasa : film festival, Anaran'ny mpamorona : Daniel Plutín Amigó, Anaran'ny mpanjifa : Daniel Plutin.
Ny Maha-Izy Ireo Orinasa Daniel Plutín Amigó film festival